Bokin'ny olon-kendry - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Bokim-pahendrena (Baiboly))
Ny bokin'ny olon-kendry na bokim-pahendrena, ao amin'ny Testamenta Taloha ao amin'ny Baiboly kristiana, izay mirakitra lahatsoratra miendrika tononkalo, tonon-kira, ohabolana ahitana fotokevitra misy fisainana lalina momba ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny fifandraisany amin'Andriamanitra, dia ireto: ny Bokin'i Joba (na Jôba), ny Bokin'ny Salamo, ny Bokin'ny Ohabolana, ny Bokin'ny Mpitoriteny (na Kôhelety), ary ny Tononkira Fanaperana (na Tononkiran'i Solomona na Tononkira dia Tononkira). Ny Baiboly Katolika sy ny Baiboly ortodoksa dia ahitana boky fanampiny deoterokanonika: ny Fahendrena sy ny Ekleziastika (na Siràka).
Ny boky ataon'ny Kristiana hoe bokim-pahedrena dia tafiditra ao amin'ny ataon'ny Jiosy hoe Ketuvim ("Soratra"), nefa tsy ny "Soratra" rehetra no ataon'ny Kristiana hoe "bokim-pahendrena", satria ny Ketuvim dia ahitana koa boky ara-tantara (Bokin'i Estera, Bokin'i Rota, Boky voalohan'ny Tantara ary Boky faharoan'ny Tantara) ary bokin'ny mpaminany (Bokin'i Ezra sy Bokin'i Nehemia ary ny Bokin'i Daniela) koa.
1 Bokim-pahendrena protokanonika
1.1 Ny Bokin'i Joba
1.2 Ny Bokin'ny Salamo
1.3 Ny Bokin'ny Ohabolana
1.4 Ny Bokin'ny Mpitoriteny
1.5 Ny Tononkira Fanaperana
2 Bokim-pahendrena deoterokanonika
2.1 Ny Bokin'ny Fahendrena
2.2 Ny Ekleziastika
ireto boky ireto ihany no bokim-pahendrena hita ao amin'ny Baiboly protestanta.
Ny Bokin'i JobaHanova
Ny Bokin'i Joba dia boky mahakasika ny fiainan'ny lehilahy iray atao hoe Joba izay tsy niala tamin'ny finoana an' Andriamanitra na dia teo aza ny fahoriana lehibe nianjady aminy vokatry ny nataon'i Satana.
Niampanga an'i Joba teo anatrehan' Andriamanitra i Satana sady nilaza fa tsy hanompo an'Andriamanitra i Joba raha miaina ao anaty fahoriana. Noporofoin'Andriamanitra amin'i Satana àry fa i Joba mpanompony dia tsy hiala aminy, na dia ao anaty fahoriana aza. Navelan' Andriamanitra hampahory an'i Joba ny devoly. Nanana sakaiza telolahy i Joba izay niady hevitra taminy ny amin'ny antony niavian'izao fahoriana mahazo azy izao. Amin'ny farany ny boky dia mitatitra ny lahateny nataon' Andriamanitra ka tonga teo amin'ny alitaram-panaovam-panatitra dorana i Joba sy ireo namany niaiky ny fahadisoan-keviny. Namerina amin'ny laoniny ny fiainan'i Joba sy nanome azy ankohonana vaovao indray Andriamanitra.
Ny Bokin'ny SalamoHanova
Ny Bokin'ny Salamo dia boky misy amboaran-kira sy tononkalo fiderana an'Andriamanitra miisa 150. Tsy hira fiderana ihany no hita ao fa misy koa ny hira miompana amin' ny lohahevitra hafa toy ny fiderana an' Andriamanitra (ohatra: faha-105), ny fitarainan' ny vahoaka amin' Andriamanitra, ny fanehoana ny finoana ny herin' Andriamanitra (ohatra: faha-47), ny fisaorana an' Andriamanitra, ny fankalazana andro firavoravoana (ohatra: faha-126).
Ny Bokin'ny OhabolanaHanova
Ny Bokin'ny Ohabolana dia fanangonam-pitenenana izay nampiasaina teo amin' i Israely tany aloha mba hampianarana ny vahoakan' Andriamanitra ny fomba tokony hiainany ao amin' ny fahamarinana araka ny Fahendrena. Nosoratana hanana endrika tononkalo ny ohabolana, sahala amin' ny salamo. Isan' ireo lohahevitra hita ao amin' ny Bokin'ny Ohabolana ny maha fanomezana avy amin' Andriamanitra ny fahendrena, dia ny fahendrena izay tokony hananan' ny olona amin' ny fotoana sy toerana rehetra ary amin' ny sehatra rehetra. Ampianariny ny tokony hanaovana sy hitiavana ny rariny sy ny fanetren-tena ary ny fananana toetra mahatoky.
Ny Bokin'ny MpitoritenyHanova
Ny Bokin'ny Mpitoriteny na Bokin'ny Kôhelety na Bokin'ny Eklesiasta dia boky miresaka momba ny maha zava-poana ny fiainan' ny olombelona mbamin' ny asa izay ataony raha tsy miaraka amin' ny fatahorana an' Andriamanitra. Io boky io dia fikarohana ny antom-pisian' ny olombelona sy izay rehetra misy eto an-tany, sy ny fomba hahazoan' ny olombelona fahafaham-po sy fiadanana, ary ny tena lanjan' ny fiainana. Tsy afaka hahalala ny dikan' ny fiainany ny olombelona, dia ity fiainana fohy sady tsy azo antoka ity. Asehon' ny boky fa misy zavatra maro tsara azo raisina sy arahina eo amin' ny fiainana nefa tsy vitsy koa ny zava-dratsy toy ny hadalana. Mamporisika ny olona ny "Mpitoriteny" mba hankamamy ny fiainana nomen' Andriamanitra azy amin' ny alalan' ny fanatanterahana zavatra toy ny asa, ny fisakafoanana, ny fisotroana, ny fisakaizana, ny fanambadiana sy ny hafa koa. Ny lehibe indrindra amin' ireo anefa dia ny fanoavana an' Andriamanitra.
Ny Tononkira FanaperanaHanova
Ny Tononkira Fanaperana na Tononkiran'i Solomona na Tononkira dia Tononkira dia mitantara ny resaka ifanaovan' ny mpifankatia mifampitaona sy mifaneho fitiavana sy faniriana. Fanangonana tonon-kira sy tonon-kalo ny Bokin'ny Tononkira Fanaperana izay mampiresaka lehilahy iray sy vehivavy iray ny amin' ny fifankatiavan' izy ireo. Indraindray izy roa dia mifamaly resaka fa indraindray koa dia miresaka amin' ny namany avy ka mahatsiahy ny fifandraisany sy ny fisakaizany.
Ireto boky ireto dia tsy hita ao amin'ny Baiboly protestanta nefa hita ao amin'ny Baiboly katolika sy ny Baiboly ortodoksa.
Ny Bokin'ny FahendrenaHanova
Ny Fahendren'i Salomona na Bokin'ny Fahendrena dia boky mamaly ny fahendrena ivelan'ny fivavahana jiosy, indrindra fa ny filozofia grika. Miresaka ny amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty sy ny famoronana vaovao ny mpanoratra sady manambara fa tsy ho mety maty sady tsy ho mety lo ny fanahin'olombelona. Milaza ny valisoa ho azon' ny olo-marina sy ny sazy ho an' ny olon-dratsy koa ny boky ary asehony fa famirapiratan' ny fahasambarana mandrakizay ny Fahendrena izay maneho ny hatsaram-pon' Andriamanitra.
Ny Bokin'ny Ekleziastika na Fahendren'i Bena Siràka dia boky mamelabelatra ny amin' ny Fahendrena izay anaovan' ny mpanoratra fitanisana ohabolana sy famelabelarana voalamina. Ny fatahorana an' Andriamanitra no fisehoan' izany Fahendrena izany. Izany dia nataon' ny mpanoratra mba hanoherany ny fihanaky ny kolontsaina grika (indrindra ny filozofia) izay mila hanototra ny kolontsaina sy ny fivavahana jiosy nolovana tamin' ny razana. Ny Fahendrena dia sady reny no vady no anabavy, ka fikatsahana an' Andriamanitra ny fikatsahana azy ary fiainana miaraka amin' Andriamanitra ny fiainana miaraka aminy.
Fanasokajiana ny boky ao amin'ny Testamenta Taloha:
Fanasokajiana ny boky ao amin'ny Tanakh (Baiboly hebreo):
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27ny_olon-kendry&oldid=990621"
Dernière modification le 6 Mey 2020, à 16:27
Voaova farany tamin'ny 6 Mey 2020 amin'ny 16:27 ity pejy ity.